UFUNA ukwehlisa intengo kadizili uNksz Zinhle Ngidi oqhamuke necebo lokuwukhiqiza ngogwayi otshalwayo, okumanje uyacijwa kuleli bhizinisi Isithombe: MPUMELELO MACU/RED BULL
ZANELE MTHETHWA | October 31, 2019
UFUNA ibhizinisi lakhe libe yisixazululo enkingeni yokubiza kukawoyela kuleli, owesifazane othole ithuba lokucijwa kulo mkhakha.
UNksz Zinhle Ngidi (30), onebhizinisi Igugu Labantu and KZN Solaris Biodiesel Project, ungomunye wabaqeqeshwa ngaphansi kohlelo iRed Bull Amaphiko Academy.
Ubesevele enalo ibhizinisi lokukhiqiza udizili ngogwayi ngesikhathi ekhethwa kulolu hlelo. Ibhizinisi likaNksz Ngidi lihlabe umxhwele abanye osomabhizinisi njengoba eqhamuke nokungajwayelekile.
Echaza ngebhizinisi, uthe walisungula ngo-2016 emuva kokwenza ucwaningo ngeBio-Fuel. Lokhu kwamvezela ukuthi angakwazi ukukhiqiza udizili ngogwayi.Waqala esifundazweni ngo-2017.
“Sisebenzisa ugwayi esiwutshalayo, ohlukile kunogwayi ojwayelekile. Lona esiwusebenzisayo awunayo iNicotene okusho ukuthi ngeke ukwazi nokuwubhema. Lo gwayi ukhipha uwoyela esikhundleni sikagwayi,” kusho uNksz Ngidi.
Utshele Isolezwe ukuthi akuwona umsebenzi omncane lona ngoba kuthatha isikhathi ukuwenza. Ngesikhathi eqala ibhizinisi ubetshala oThongathi kodwa usenabele naseNdwedwe.
Uthe usezingxoxweni nenkosi okuyiyona emnike indawo ukuthi aqeqeshe amalungu omphakathi azosizana nawo ukutshala. Mayelana nokudayisa lo dizili, uNksz Ngidi uthe usasayine isivumelwano kuphela kodwa akukafiki emaphethelweni ezinhlelo.
“Kudingeka sithole imishini ezosisiza ukuze siqale sidayise. Okuhle wukuthi sikhona isidingo salo dizili kuleli futhi ungaba yisixazululo ngoba elakuleli liwuthenga kwamanye amazwe uwoyela.
“Uma siwukhiqiza kuleli kungehla amanani futhi lolu hlobo lukadizili aluyilimazi imvelo.”
Isifiso sikaNksz Ngidi wukuthi abe nendawo ezokhiqiza udizili ongamalitha angu-15 million.
Uthe wangeniswa wuthando lokutshala kuleli bhizinisi njengoba afundela okwehlukile emfundweni ephakeme. Wenza izifundo zeWealth Management eMilpark Business School, wabuye waba yiFinancial Advisor. Mayelana neRed Bull Amaphiko Academy, uthe uqale ngoJuni ukungena kulolu hlelo oluzothatha izinyanga ezingu-18. Kulolu hlelo basizwa ngokuqeqeshelwa ibhizinisi baphinde banikezwe abazobaluleka.
Uthe wafaka isicelo wakhethwa nabangu-15. Lolu hlelo lwaqalwa ngo-2014 eSoweto ngaphambi kokukapakela kwamanye amadolobha.
UNksz Ngidi omncane ezinganeni zakwabo, wazalelwa KwaMashu, wakhulela naseNkandla lapho umndeni wakhe unomuzi khona. Waphothula * -matric eDurban Girls Secondary.